माधवको नयाँ पार्टी : दक्षिणपन्थी उग्रक्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतवार, साउन २४, २०७८ मा प्रकाशित
समय बलवान छ भन्थे बुढापाकाहरु, हो रहेछ । त्यसबेला नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको दुर्घटनामा मृत्यु भयो । हाम्रो माधव काम्रेडलाई चिठ्ठा प¥यो । भाग्यमानी माधव काम्रेडले आफूसंग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने नेताहरुको छानी छानी तेजोबध गर्नुभयो । उहाँको पहिलो निशानामा सिपी, केपी, आरके र वामदेव थिए । त्यसबखत सजिलो थियो । अहिले जस्तो शक्तिशाली विरोधी पार्टी भित्र थिएनन् ।
हैन ए उभिण्डेका कान्छा ! के सोचेर बसेको छस् ! माधव नेपालकै बारेमा त सोचेको होलास् । तेरो माधवको नराम्रो छैन । प्रचण्डले एमाले फुटाउने विषय बाहेक अन्त सोच्न पनि दिदैंनन् । हाम्रो देउवा दाइले ललिपप चुसाई दिएका छन् उताबाट बेला–बेला ओलीले सत्य कुरो प्याच्च भनिदिन्छन् । फेरि यिनीसंग निर्णय गर्न सक्ने क्षमता छैन । यिनी भनेका ‘सेकेण्ड मेन’ हुन मात्रै सक्ने मान्छे हुन् ।
भिरघरे दाई ! मलाई पनि त्यस्तै लाग्न थाल्यो । निर्णय गर्न चै यिनले सक्तैनन् । कि त पार्टी खोल्नु, कि त ओलीको शरण पर्नु । यो बाहेक अर्को विकल्प यिनीसंग छैन । तर, हाम्रो मेटमणि काम्रेडलाई अघोषित प्रवक्ता बनाएर बोल्न लगाउँछन् । मेटमणिले अस्ति शुक्रवार सरकारमा पनि जाने, समानान्तर समिति पनि माथिदेखि तलैसम्म बनाउने र ओलीसंग एकता पनि गर्ने भने । यो भनेको के हो ? कसैले पनि बुझेन ।
लौ भतिजहरु त आज यता पो बसे छौ । हामी पनि आज बोजुलाई घरमा छाडेर यता घुम्न निस्केको ।
काका–काकी दुबै यता गुन्द्रीमा बस्नु होस् । अनि काकी ! अब तिम्रा अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको लागि के गर्लान ?
हेर भिरघरे ! केपी अब अगाडि बढ्छन् । आउने आउदै गर्छन, जाने जाँदै गर्छन । आउनेलाई यथापदमा राख्ने निर्णय गरी सकेको छ । वडादेखि केन्द्रसम्मका कार्यकर्ता पार्टी संगठनमा जुटीसके । माधव झुण्डले भन्दैमा महधिवेशन रोकिदैन । उनारु त ओलीलाई पनि आफू जस्तै अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोज्दै छन् ।
यो झुम्रीले भनेको हुँदै होइन । माधव अहिले कम्जोर देखिए पनि अलिपछि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा बुहमत पु¥याएर हाम्रो पार्टी माओवादीमा विलय हुन्छन् । हामी उनलाई सर्वमान्य नेता बनाएर राख्छौ । सूर्य चिन्ह र जवज पनि हाम्रै हुन्छ । उस्तै परे ‘एमाले’ भन्ने नाम पनि हामी नै लिन्छौ !
हेर ध्वंसघरे काका ! तिम्रो यो सपना हावाको सपना हो । तिमारु अब माधवलाई पुतली बनाएर नचाउँदै गर, ओली आफ्नो लक्षमा अगाडि बढ्दै गर्छन् । माधवको ल्याङल्याङ देखेर जिल्ला–जिल्लामा माधवका कार्यकर्ता ‘जता सूर्य, जता जबज, जता एमाले उतै हामी’ भन्न थालीसके । माधव त अन्तिममा १० जना सांसद पद खुस्किएका व्यक्ति बोकेर माओवादीतिर !
वाइयात कुरो गर्छस् भिरघरे ! अब मेटमणि, झाक्री, किसान, प्रेम आले र वेदुराम मन्त्री बन्दै छन् । उनारु मन्त्री बनेपछि माधवलाई पनि खर्चवर्चको दुःख हुदैन । यदि ओलीतिरका २०।२५ जना सांसद माधवतिर आम्छन् भने प्रचण्डसंग मागेर तीन चार करोडका दरले मुखाँ बुझो लाग्ने गरी दिए हुन्छ ।
त्यो त हाम्रो देउवा दाइको पारा भैगोनि । यस्तो विषयमा त देउवा दाइ, प्रचण्ड र माधव बसेर कुरा गर्दा उपाय निस्कन्छ । तर, जतिसुकै गरे पनि चुनापमा भिडन्त भनेको ओली एमाले र देउवा कांग्रेसकै हुन्छ । तिमार्को पार्टी माओवादी र माधव काम्रेडको नयाँ बन्ने ‘दक्षिणपन्थी उग्रक्रान्त्रिकारी कम्युनिष्ट पार्टी’ ले धुलो चाट्छ ।
हेपेर नबोल भिरघरे ! हाम्रो पार्टीका महान सर्वहारा नेता, राष्ट्रनायक, उच्च छलाङ विचारधारका जन्मदाता कम्रेड प्रचण्ड त्यसै कठोर कदम चाल्नेवाला व्यक्ति होइनन् । सोचेर बुझेर नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र माधवलाई एमाले फुटाउन प्रेरित गरेका हुन् । अबको चुनापमा हाम्रो माओवादी सप भन्दा ठूलो पार्टी बन्छ ।
सुनिस् होला नि भिरघरे यी बुढाको कुरा । कार्यकर्ता सिला खोजेर हिड्नु पर्ने माओवादीले माधवको बैशाखी टेकेर चुनाप जित्ने कल्पना गरेका छन् । माधव र प्रचण्डलाई जनताले अब तिरस्कार गरेर भित्तैमा पु¥याउँछन् ।
झुम्री काकीले ठिकै भनिन । म अहिले वामदेवले बनाएको ‘माले’ सम्झदै छु । हामी धेरै जसो नेतासहित वामदेवका पछिपछि लागेका थियौं । त्यसबेला हाम्रो चुरीफुरी सानो होइन । जता हे¥यो उतै माले । भोट गन्दा त हामी जिरो, एमाले हिरो । त्यही सोचेर म त माधव गुट छाडेर एमालेतिरै फर्के !
तँ फर्केर के गर्छस् । वामदेवसंग त्यसबेला हाम्रा महान राष्ट्रनायक प्रचण्ड काम्रेड थिएनन्, कांग्रेसको समर्थन थिएन । अहिले माधवको पक्षमा एकोहोरो शंख फुके जस्तो समर्थन छ । सूर्य चिन्ह, एमाले र जबज जता छ ‘हामी उतै छौं ! भन्नेहरु जान्छन् । अरु सपै माधवतिर ।
लौ हेरौंला ! अब पाँच सात दिनमै थाहा भैहाल्छ । को कता लाग्छन् भनेर । अहिले हाप्सिलो कराए जस्तो भाषण गर्नै पर्दैन ।
लौ है काका–काकी, भाइ म लागें घरतिर ।